Kömürhanတံတားကမ္ဘာကြီးကို4။ တန်ဖိုးများ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး23 ElazigKömürhanတံတားကမ္ဘာကြီးကို4။ အဆင့်
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 23 Elazig, 44 Malatya, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
အမိန့် dunyada အတွက်Kömürhanတံတား
အဆိုပါ 2014 368 သန်းခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်Kömürhanအလုပ်စလုပ်ဖို့ပေါင်တံတားအဆုံးမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, တံတားစာပေလောကီသားတို့သည်အဝင် 2020 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီးအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
Malatya-Elazığအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများအကြား 5150 မီတာစုစုပေါင်းKömürhanတံတားနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါလမ်းနှစ်သိမ့်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ Malatya နှင့်Elazığအကြားအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုများသည်တိုလိမ့်မည်ထောင့်တွင်တားဆီးလိမ့်မည်။
ပြီးစီးခဲ့ပါသည်Kömürhanဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်းရောင်နှင့်လေဝင်လေထွက်နှင့်အတူစက်မှုအကျင့်ကိုကျင့်တခြားလေ့လာမှုတွေ။ တင်ဒါလုပ်ငန်းကိုမကြာမီစတင်မည်, ကျန်ရှိနေသေးသောအစိတ်အပိုင်းများ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း၌2400 တထောင်မီတာရှည်လျားကွေးဆိုင်းငံ့ပါလိမ့်မည်Kömürhanအမွှာ-ပြွန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိကိုလက်စသတ်နေသည်။
လေ့လာမှုရဲ့အဆုံးမှပိုနီးစပ်ခဲ့သည့်Kömürhanတံတားအတွက် 660 မီတာအကွာတွင်။ 168,5 မီတာအပိုင်းပြီးစီးခဲ့သော 154 မီတာKömürhanတံတား (မျှော်စင်) အမျိုးအစားများ၏ရွက်တိုင်၏ဦးနှောက်အာရုံကြောရှိုရပ်ဆိုင်းမှု။ နီးပါးပြည့်စုံသည့် 25 10 ကနေသံမဏိအစိတ်အပိုင်း၏ bridge ပရိသ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောစည်းဝေးပွဲပြီးစီးများအတွက်ကောင်းစွာဆဲ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ4။ ဖြတ်
Kömürhanတံတား inverted Y ကို-type အမျိုးအစားရဲတိုက်ကဲ့သို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးစာပေကနေ 3804မီတာဖို့တာဝါတိုင်နှင့် Mid-span တစ်ခုမှာ။ ဒါဟာ # အဆင့်။ တံတားများပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့် 100 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း Capital ပြီးဆုံးပါပြီ
တံတားများသံမဏိ7တထောင်တန်ချိန်အသုံးပြုသောခံရဖို့တိုင်းရင်းသားနည်းပညာကို အသုံးပြု. ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြင်သစ်အတွက် Eiffel မျှော်စင်များတွင်သံမဏိ၏ပမာဏ, တံတားများဆောက်လုပ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်သည့်အခါနှိုင်းယှဉ်သံမဏိတက်စေခဲ့သည်။
တံတား BRIDGE နှင့် Tunneling ရဲ့ COMPLETED 2020 ရည်ရွယ်ခံရ
Kömürhanတံတားနှင့်တစ်နှစ် 2020 အဆိုပါချိတ်ဆက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အများပြည်သူ၏ကျန် Malatya အတွက်သူ့အလုပ်၏အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြောင်း, တစ်ဦးမိန့်ခွန်းမှာအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံကြေညာခြင်းနှင့်အချိန်တိုအတွင်းပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
တံတားဆောက်လုပ်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အသွားအလာလျော့ပါးစေရန် 2014 368 နှစ်တွင်သန်းပေါင်စတင်ခဲ့သည်။
87 တံတား BRIDGE ပထမနှစ်တွင်မတိုင်မီပေးခဲ့သည်
3 တံတား၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးမှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တံတားအနေအထား၌တည်၏။ သူ Karakaya ဆည်ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရသည်ဖွငျ့ဝန်ကြီးချုပ် Turgut Ozal အခါ 1932 အတွက်လုပ်ပထမဦးဆုံးတံတား။ နောက်ပိုင်းတွင်အောက်ပါတံတားများအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း 1986 နှစ်တွင်။ (ဟူစိန်Kızluk - Vuslathab ဖြစ်ပါသည်)
အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်Kömürhanတံတားစီမံကိန်းကိုဖြစ်သင့် 13 / 08 / 2013 အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်Kömürhanတံတားစီမံကိန်းကိုဖြစ်သင့်: AK ပါတီ Malatya လက်ထောက် Mustafa Sahin, Malatya နှင့်Elazığကြားရှိဥဖရတ်မြစ်တံတားစီမံကိန်းကိုအပေါ်Kömürhanအသစ်လုပ်ခံရဖို့သူရထားလမ်း system ပေါ်တွင်ထားသင့်သည်ဟုဆိုသည်။ လက်ထောက် Hawk ရဟတ်ယာဉ် "ဟုအဆိုပါ Malatya-Elazığနူးညံ့ခဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူအရှည်Kömürhanတံတား link ကိုလမ်းအတွက် 578 မီတာကပြောင်းသွားတယ်။ သို့သော်ဤစီမံကိန်းသည်ဒေသတွင်းအရေးပါသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ရထားလမ်းစနစ်ကကျွန်မအသစ်ကတံတားပေါ်ပါလိမ့်မည်ထင်သောထားရပါမည်Kömürhan။ ပြည်နယ်များအကြားတစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူတိုး, လာမယ့်နှစ်တွေမှာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ရထားလမ်းစနစ်ကဖြစ်စဉ်းစားခဲ့စဉ်းစား Malatya, Elazığ ...
တိုင်းပြည်ထုတ်လွှတ်လျှော့ချရေး၏ထိပ်အစီအစဉ်အဆင့် 05 / 04 / 2014 ပြက္ခဒိန်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တိုင်းပြည်ထုတ်လွှတ်လျှော့ချ: အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှသန့်ရှင်းထုတ်လွှတ်လျှော့ချ၏စည်းရုံးရေးမှူးအဖြစ်ထိပ်ဆုံးအနေအထားမှာလေ့လာတွေ့ရှိ livable သောလောကီမှထွက်သွားရချင်သူနိုင်ငံများက။ ITU, ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပကာဗွန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပထမဦးဆုံးစပီကာဗွန်စီမံခန့်ခွဲမှု, နိုင်ငံများကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အစီအမံယူသင့်တယ်, တူရကီထိုသို့သောကာဗွန်ဈေးကွက်အဖြစ်အရေးကြီးသောကိစ္စများကျော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမန်ပတ်ဝန်းကျင်န်ကြီးဌာန, ထိပ်သီးအစည်းအဝေး Angelika Smuda တက်ရောက်ကိုယ်စားလှယ်, အဖွဲ့အစည်းများယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးပွားလာသောကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ ...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ယူကရိန်းရထားလမ်း 27 ။ အဆင့် 04 / 06 / 2012 ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်အားဖြင့်ကောက်ယူ "ဟု The Global ဖွင့်ပေးခြင်းကုန်သွယ်ရေးအစီရင်ခံစာ 2012" ဟုအဆိုပါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်အဆင့်ကမ်ဘာပျေါမှာရထားလမ်း xnumx'nc အရည်အသွေးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယူကရိန်းရာအရပျကိုယူ။ အဆိုပါအဆင့် 27 အတွက်တူရကီရဲ့ရထားလမ်း။ ဒါဟာနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယူကရိန်းရဲ့ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏အရည်အသွေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယူကရိနျးမီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုသားအပေါင်းတို့ဓနသဟာယဖြင့်ကြေညာချက်အရ (CIS) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ စပိန်နဲ့ဖင်လန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဆွစ်ဇာလန်, ဂျပန်, ဟောင်ကောင်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, နယ်သာလန်, စင်္ကာပူ, တောင်ကိုရီးယားအတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, sort ။ ရထားလမ်းရာထူး, CIS အဖွဲ့ဝင်xnumx'üncကနေကာဇက်စတန်ရှိနေစဉ်, ထိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်နေရာမရှိဘီလာရုစ်နှင့်အတူတာ့ခ်မင်နစ္စတန်ဖြစ်သည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.timeturk.co
တူရကီနိုင်ငံသည် YHT မြန်နှုန်းkaçıncıအဆင့်? 16 / 06 / 2012 ဂျပန် Maglev ရထားကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားများ၏စာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံးအမည်ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အရာအလို့ငှာတူရကီပါသလဲ YHT တူရကီနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနည်းပညာကို အသုံးပြု. 8 ။ ဒါဟာတိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.ekofinans.co
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Altepe: တန်ဖိုးများမြန်ရထားနှင့်မီထရို Wagon ဖြစ်ရမည် 07 / 07 / 2012 Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, သူတို့လမ်းရထားအတွက်ပစ်မှတ်ရောက်ရှိသူမြေအောက်ကားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအားပြောကြားခဲ့သည်ရပါမည်။ လွတ်လပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်း '' နှင့်စီးပွားရေးသမားများရဲ့အသင်း (MUSIAD) စက်စက်မှုလက်မှုကော်မတီ Bursa ဘဏ်ခွဲ, '' 2023 ပို့ကုန်ပစ်မှတ်အဆိုပါစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတည်နေရာနဲ့စားပွဲပေါ်တင်ကြ၏ Bursa '' ဘာသာရပ်များ၏ကဏ္ဍအတွက်အခွအေနေ။ အဆိုပါ Hilton Hotel ၌ကျင်းပတစ်ဦးကအစည်းအဝေး, Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe နှင့် Durmazlar Holding ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Huseyin Durmaz တက်ရောက်ခဲ့သည်။ MUSIAD Bursa ဌာနခွဲကသမ္မတ Hasan Çepniသူတို့တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ခေါ်ဆိုခÇepniလည်း, သောရထားလမ်းစနစ်ကအလေးပေးက "ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရထားစနစ်က ...
Malatya - Elazig အဝေးပြေးလမ်းမကြီး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Altepe: တန်ဖိုးများမြန်ရထားနှင့်မီထရို Wagon ဖြစ်ရမည်
TÜVASAŞ, အကြီးဆုံးအစိုးရပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီး 12 ။ အဆင့်
အသစ်ကအလယ်ဗဟို၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက; Olympos Cableway